'मैले सांसद पद साटेकै हो, वामदेवसँग पैसाको कुरा पनि भएको हो'| Nepal Pati
वामदेव गौतमका लागि पद छाड्न तयार भएपछि अहिले काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धर चर्चामा छन् । पार्टीलाई राजीनामा बुझाएर उनी दुःखी होइन, बरु खुसी सारिरहेका छन् । पार्टी शीर्ष नेताहरूसँग सोमबार छलफल गरेपछि पद छाड्ने ‘स्वीकृतिपत्र’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका मानन्धर किन खुसी ? नेपालपाटीले गरेको छोटो कुराकानी
खास तपाईले वामदेवलाई सांसद पद किन छाड्दै हुनुहुन्छ ?
वामदेव गौतमका लागि भन्दा पनि पार्टीका लागि । पार्टीले वामदेवलाई आबश्यकता ठानेर मलाई प्रस्ताव गरेपछि म पद छाड्न तयार भएको हुँ । पार्टीले नै मलाई जिम्मेवारीमा पुर्याएको हो पार्टीले नै भन्यो भने छाड्न पनि तयार हुनुपर्छ ।
पार्टीले के आश्वासन दियो र तपाई सांसद पद छाड्न लाग्नुभयो ?
पार्टीले उचित जिम्मेवारीको आश्वासन दिएको छ । त्यो उचित जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा पार्टीलाई नै थाहा होला । मुख्य कुरा मेरो क्षेत्रमा विकास हुने सर्तमा मैले सांसद पद छाड्ने सहमति जनाएको हुँ । पार्टी निर्णयको पालना हामी सबैले गर्नुपर्छ । हामीलाई टिकट पार्टीले दिने हो । कसले लियो र कसलाई दियो भन्ने कुरासँग भन्दा पार्टीसँग म मतलब राख्ने मान्छे हुँ।
त्यो विकास चै सरकारले गर्ने की वामदेवले ?
सरकारले पनि गर्छ वामदेव गौतम जितेपछि उहाँले पनि गर्नुहुन्छ । म सांसद भए र सांसद नै रहे । वामदेव गौतम सांसदसँगै महत्वपूर्ण जिम्मवारीमा पनि रहनुहोला । उहाँको आबश्यकता संसदलाई पनि छ । त्यसकारण विकासको भूमिका मुख्य रुपमा उहाँले खेल्नुहुन्छ । मलाई विश्वास छ । वामदेव आउदा मेरो क्षेत्रमा विकास हुन्छ । विकाससँग मैले पद साट्न खोजेको हुँ ।
तपाईलाई राष्ट्रियसभा हुँदै मन्त्री बनाउने सहमति भएपछि मात्रै तपाईले सांसद छाडेको भन्ने छ नी ?
मैले मन्त्री बनाउने पक्का भएपछि सांसद पद छाडेको होइन । तर पार्टीले आबश्यकता ठानेर त्यो जिम्मेवारी दियो भने मेरा लागि र मेरा मतदाताका लागि खुसी नै हुनेछ । मुख्य कुरा वामदेव पार्टीका लागि, सरकारका लागि संसदका लागि आबश्यक व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँका लागि मैले त्याग गर्न पाउन मेरा लागि त खुसी कै कुरा हो ।
वामदेवले जित्नु हुन्छ त तपाईको क्षेत्रमा ?
मैले अहिलेसम्म चारपटक चुनाव लडे कुनै पनि चुनाव हारेको छैन । दुई पटक त सांसद नै भए । अघिल्लो पटक चुनाव हार्ने डरले अरुले उम्मेदवार नै बनाएनन । अहिले पनि चुनाव जतिन्छ । त्यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने कुरा नै छैन ।
हामीले जिताएको मान्छे भाग्यो, सांसद पद साट्यो भनेर मतदाता रिसाउलान नी ?
म भागेको होइन । म त अझ झन सक्रिय भएको । मैले सांसद पद साटेको हो भने विकास सँग मात्रै हो । म विकाससँग जिन्दगी नै साट्न सक्ने मान्छे हो । त्यो कुरा मेरा मतदाताले बुझ्छन । म बुझाउछु ।
प्रधानमन्त्रीसँग पनि तपाईले यो बिचमा थुप्रै पटक भेट्नु भयो होला नी के भन्नुहुन्छ ?
आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीसँग भेट नहुने कुरा नै छैन । यो सन्दर्भमा पनि भयो । मैले पार्टीमा राजीनामापत्र ‘स्वीकृतिपत्र’ बुझाएपछि पनि भेट भयो । उहाँले अब ब्यवस्थापन गर्ने तपाईले नै हो । कसरी गर्नुहुन्छ गर्नुहोला भन्नुभएको छ । पार्टीले भन्छ त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा बुझाउनुहोला भन्नुभएको छ ।
तपाई र बामदेवका बिचमा पैसाको कुरा भयो भन्ने सुनिन्छ नी केहो खास ?
त्यो अब चुनाव भयो भने लाग्ने खर्चसँग जोडेर भएको हो सामान्य रुपमा । अहिले मतदाताहरु सरकारसँग, महानगरसँग अलिरिसाएका छा् भन्ने सन्दर्भमा उहाँले पुरै सयन्त्र परिचालन गरेर त्यसै अनुसार खर्चको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो ।
ठ्याक्कै एक अर्बको कुरा चै भएन ।
बामदेवको रहर ओलीको बाध्यता